Tourist Arrival – CEO Business & Management Magazine
၁။ လကွေောငျးခရီးစဉျဖကျြသိမျးလို ဂိတျပေါကျမှာပဲ ဆကျထိုငျစောငျ့နတော။ လကွေောငျးခရီးစဉျဖကျြသိမျးလိုကျလို့ စိတျပကျြနမေယျ့အစား လကွေောငျးလိုငျးကုမ်ပဏီကို တိုကျရိုကျဖုနျးဆကျပွီး စုံစမျးမေးမွနျးတာက လကျမှတျကောငျတာက အရောငျးဝနျထမျးကို မေးတာထကျပိုမွနျပါတယျ။ ၂။ ခရီးသညျအရမျးမြားလို့ စိတျမရှညျတာ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ တနင်ျလာမနကျပိုငျးနဲ့ သောကွာညနပေိုငျးတှဟော လဆေိပျမှာ ခရီးသညျမြားပွားတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ ခရစ်စမတျနဲ့နှဈသဈကူးကာလရုံးပိတျရကျတှဆေိုရငျ လူပိုမြားတတျတဲ့အတှကျ လဆေိပျလုံခွုံရေးဂိတျမှာ အကွာကွီးစောငျ့ရပါတယျ။ ၃။ ရှိသမြှလယောဉျလကျမှတျတှရေောငျးထားပွီး ခရီးသညျတှမေတငျနိုငျတဲ့အခါ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ သငျ့ကို လကွေောငျးလိုငျးတှကေ လယောဉျလကျမှတျတဈစောငျပွနျပေးပါလိမျ့မယျ။ သငျက ခရီးခဏခဏမထှကျဖွဈရငျ လယောဉျလကျမှတျအစား ငှသေားပဲပွနျတောငျးပါ။ ခရီးသညျတဈဦးရဲ့ အခှငျ့အရေးကို အပွညျ့အဝအသုံးခပြါ။ ၄။ လယောဉျနောကျတဈစီးပွောငျးမစီးခငျမှာအပွညျ့အဝအနားမယူတာ။ ခရီးသှားနကေမြဟုတျတဲ့ ခရီးသညျတှဆေိုရငျတောငျမှ လယောဉျနောကျတဈစီးမစီးခငျမှာအမရေိကနျဒျေါလာ ၆၀ ဝနျးကငျြကသြငျ့မယျ့ Admirals Club ၊ Sky Club ၊ United Club စတဲ့ Lounge […]
ဟိုတယ်အခန်းထဲ ရောက်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်ပထမဆုံး ဘာလုပ်ဖြစ်လဲ။ အိပ်ရာထဲမှာ ၀င်နားတာလား။ ပြတင်းပေါက်နားသွားပြီး ရှုခင်းကြည့်တာလား။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး မျက်နှာသစ်၊ ရေချိုးတာလား။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာ ဘာတွေလိုလဲ၊ ဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးစစ်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးထွက်လေ့ရှိသူတွေ ဟိုတယ်အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တာတွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ WiFi ရမရကြည့်ပါ တစ်နေကုန်အပြင်သွားပြီး ဟိုတယ်ကို ည ၁၁ နာရီမှ ပြန်ရောက်တယ် ဆိုရင် WiFi သုံးဖို့ လိုမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒီတော့ WiFi ရမရစစ်ပါ။ မရရင် ဟိုတယ်တာဝန်ခံတွေကိုပြောပါ။ ''ဟိုတယ်အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ကျွန်တော်ကတော WiFi ရမရ အရင်ဆုံးကြည့်တယ်'' လို့ North America Marketing, KAYAK ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ David Solomito က […]
Posted On December 14, 2018, By Editorial
၂၀၁၅ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် KBZ ဘဏ်မှ Credit Card များထုတ်ပေးခဲ့သော်လည်း Saving Account နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး Account ထဲတွင် ငွေရှိမှဖြစ်မည်ဟု ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းတွင်တော့ CB ၊ AYA ၊ MOB စသဖြင့် ဘဏ်များမှ အသီးသီး Credit Card များထုတ်ပေးခဲ့ပြီး လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ Income နှင့်သာ Credit Limit ကို ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှစပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း AYA ၊ CB ၊ KBZ ၊ MOB နှင့် UAB တို့၏ Credit Card များရနိုင်နေပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ယူဆောင်သုံးစွဲနေကြပြီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး […]
Posted On May 30, 2018, By Editorial
အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Hilton ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဒုဥက္ကဌ William Costley နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Hilton ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်း ပြောပြပေးပါ . . . အခုချိန်မှာ Hilton ဟာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတစ်ဝန်းမှာ ဟိုတယ် ၂၇ ခုကို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဗီယက်နမ်၊ မော်လ်ဒိုက်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေသအတွင်း လောလောဆယ်မှာ အခန်းပေါင်း ၈,၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ နောက်ထပ်ဟိုတယ် ၃၃ ခု ဆောက်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာကို သုံးသပ်ပြပါ . . . အရှေ့တောင်အာရှဟာ တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စီးပွားရေးအခြေခံတွေက ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေလို့ပါပဲ။ အကြောင်းတစ်ခုကတော့ အဲဒီမှာအရွယ်အစားကြီးမားပြီး […]
Posted On February 6, 2017, By Editorial
E-Visa ထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်သော နိုင်ငံစာရင်းထုတ်ပြန်
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအဆင်ပြေစေဖို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ နိုင်ငံပေါင်း ၄၃ နိုင်ငံကို e-visa ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခု အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အများဆုံး ၀င်ရောက်တဲ့ နိုင်ငံ ၂၄ နိုင်ငံကိုလည်း e-visa ထပ်မံခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထပ်မံခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ သြစတြီးယား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ အက်စတိုးနီးယား၊ ဂရိ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုင်ယာလန်၊ လတ်ဗီးယား၊ လစ်သူရေးနီးယား၊ လူဇင်ဘတ်၊ မော်လတာ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဆလိုဗက်ကီးယား၊ ဆလိုဗေးနီးယား၊ ဆွီဒင်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ ကိုလမ်ဘီယာ၊ အာဂျင်တီးနား၊ ချီလီ၊ ပီရူး၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ပနားမား တို့ဖြစ်ပါတယ်။